SHARIIF Xasan Sheekh oo go'aan lama filaan ah uu kasoo baxay (Warbixin) - Caasimada Online
Home Warar SHARIIF Xasan Sheekh oo go’aan lama filaan ah uu kasoo baxay (Warbixin)
SHARIIF Xasan Sheekh oo go’aan lama filaan ah uu kasoo baxay (Warbixin)
Baydhabo (Caasimada Online) Guddoomiyihii horre ee baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka soo horjeestay shirka dhawaan ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay, kaasoo looga arrinsanaayo maamul cusub oo loo sameeyo gobalada Koonfur Galbeed ee dalka.
Isagoo la hadlaayay mid ka mid ah Idaacadaha Muqdisho, ayuu sheegay in shirka wajiga labaad ka furmay Baydhabo uu yahay shir ay wataan xildhibaanno iyo shakhsiyaad gooni ah oo aan loo dhammeen.
Wuxuu sheegay xilligan in uusan jirin shir ka furmay Baydhabo waayo ayuu yiri waxaa socda wadatashiyo marka dad badan ayaa ka maqan ayuu yiri.
“Waxaan anniga qabaa beelaha dhammaan ma joogaan shirka, teeda kale shir aan dowladda ogeyn cid qaban karto ma jirto,ciladahaas ayuu qabaa teeda kale xildhibaannada shaqo u taallo ma ahan shirkaas” ayuu yiri xildhibaan Shariif Xasan.
Shariif Xasan ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in shirka lagu koobo uun seddax gobal,waayo ayuu yiri gobalada Jubbooyinka iyo Gedo hadda maamul caalamka iyo dowladda ay aqoonsan tahay ayaa ka jirra ayuu yiri.
Wuxuu sheegay in hadda loo bahan yahay uun siddii maamul cusub loogu sameen lahaa dadka degga gobalada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Shariif Xasan ayaa ka soo horjeedo qorshe uu wado Xildhibaan Aadan Madoobe oo horrey isna u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka, kaasoo u ololeenaya in maamulka cusub uu noqdo lix gobal oo ay ku jiraan Jubbooyinka iy Gedo.
Go’aanka lama filaanka ah ee uu qaatay Shariif Xasan ayaa imanaya xilli horey looga soo ceyriyey magaalada Baydhaba, ayada oo lagu tuhmay inuu waday shirqool ka dhan ah shirka, oo ay gadaal ka riixeyso Villa Somalia.